उन्मुक्त पुस्ता 'आँगनमा कविता’ मार्फत सडकमा (फाेटाे फिचर)
दूरदराजका गाउँ , बस्ती जागरण गर्ने पुस्ताको आन्दाेलनलाई पिँधमा रहेका जनमानसले स्वागत गरेका छन्
बैशाख ३०, २०७६ सारङ्गी न्यूज
तस्विर केवल बिनाबीकाे फेसबुकबाट
मकवानपुर । सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा आफूलाई होमेको उन्मुक्त पुस्ताले पुनः सडकमा फर्केको औपचारिक घाेषणा गरेकाे छ ।
तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको मकवानपुर जिल्लाको सिमभञ्ज्याङ्गमा उन्मुक्त पुस्ताले आयोजना गरेको 'आँगनमा कविता’ शृङ्खलालाई सडकमा फर्केको औपचारिक घाेषणा मान्न सकिन्छ ।
उन्मुक्त अभियन्ता मुक्तान थेबाले लेकाली ठण्डा मौसमलाई तताए । स्थानीयवासीलाई मन्त्रमुग्ध पार्ने गरी स्थानीय भाषाको गीत गुनगुनाए भने उनले स्थानीय भाषा र लवजमा उनले `आँगनमा कविता’ को औचित्य र उपादेयताबारे प्रष्ट्याए । चर्चित युवाकवि यश लामाले स्थानीयवासीको सघन उपस्थितिलाई सम्बोधन गरे ।
धारिला युवाकवि पुरूषोत्तम आचार्यले सेलो गाएर उपस्थित जनसमुदायलाई छमछमी नचाए । लेकाली वसीफाँट मा‍विका छात्रछात्रा रविना पाण्डे, अविरल थापा, सुशीला लो, रचना बम्जन, सागर वाइबा, प्रशान्त स्याङ्तान र शिक्षक राजेन्द्र चौधरीले आआफ्ना रचना प्रस्तुत गरे ।
`आँगनमा कविता’ कार्यक्रममा केवल बिनाबीले जागरण गीतका साथै विभेदविरुद्ध लेखिएको कविता वाचन गरे । मुक्तान थेबा, धर्मराज स्याङ्तान, सुमनराज श्रेष्ठ, यश लामा, प्रकाश गुरागाईं, केशव सिलवाल, माधव घिमिरे `अटल’, छम गुरुङलगायतका अभियन्ताहरूले आआफ्ना सिर्जना सुनाए, आँगनमा । लोकदोहोरीमा पनि रम्न भ्याए , स्थानीयवासी ।
सांस्कृतिक रूपान्तरणका निम्ति अनवरतरुपमा आन्दोलनरत उन्मुक्त पुस्ता हरेकखाले विकृति, विसङ्गति र विभेदविरुद्ध सडकमा उत्रिएको छ, केही वर्षयता । संविधान निर्माणको छेकमा उन्मुक्त पुस्ताले लगातार ४२ शृङ्खला राजधानीका ३ जिल्लामा पोष्टर कविता अभियान गरेर संविधानमा समाविष्ट विभेदकारी प्रावधानविरूद्ध सडक तताएको थियो ।
तर एउटा कालखण्डमा आरनमा कविता सञ्चालन गर्दैगर्दा आफ्नो घोषित नीतिविरुद्ध अघि बढ्न थालेको त होइन उन्मुक्त पुस्ता भन्ने संशय बढेको थियो । तसर्थ आँगनमा कविता ʼ शृङ्खलाको आरम्भ गरेर पुनः दूरदराजका गाउँ , बस्ती जागरण गर्ने पुस्ताको जमर्कोलाई पिँधमा रहेका जनमानसले स्वागत गरेका छन् ।
`आँगनमा कविता’ कार्यक्रममा धर्मराज स्याङ्तान, छम गुरुङ, सुमनराज श्रेष्ठ , यश लामा र पुरूषोत्तम आचार्यले आफूहरू उन्मुक्त आन्दोलनमा विधिवत् समाहित हुन पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे ।
रत्ननगरमा बहुभाषिक लोकगीत उत्सव, लमजुङमा बहुभाषिक गोष्ठी दुवैको तयारी पूरा
शङ्कर लामिछाने अर्थात इमान्दार चाेर ? यसरी भयाे उनकाे लेखकीय जीवनकाे अन्त्य ?
मुखले भन्छ,याे देश बन्छ , कामले खान्छ ?
जेठ ४, २०७६ सारङ्गी न्यूज
द झुण्डिएको लालको बिन्ति-पत्र !
जेठ ३, २०७६ सारङ्गी न्यूज